घरको सुख शान्ति कायम गर्न गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस् ! Weekly Nepal
घरको सुख शान्ति कायम गर्न गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस् !
April 11th, 2017 | by Weekly Nepal
काठमाडौं ।दानलाई हाम्रो धर्ममा महत्वका साथ हेरिन्छ । भनिन्छ, दुखी र असहायहरुलाई केही दान गर्यो भने आफूलाई पनि सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ । शास्त्रले गाई सेवालाई पनि धर्मसँग जोडिएको छ । गाईलाई सबै देवी देवताको निवास पनि भनिन्छ । यही कारण पनि गाईको सेवा गर्नाले भगवान खुशी हुन्छन् भन्ने मान्यता हाम्रो समाजमा छ । हामीले गाईलाई लक्ष्मीको रुपमा पूजा गर्छौं ।
भगवान श्रीकृष्णसँगै गाईको पनि पूजा गरिन्छ । भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना भक्तलाई आफ्नो पूजा नगरी गाई पूजा गर्न सुझाउनु भएको हो । यही कारण गाई पूजा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।गाईको धार्मिक महत्वलाई मध्यनजर गर्दै केही घरमा सबैभन्दा पहिले गाईलाई खुवाएर मात्र खाना खाने चलन हुन्छ । यो काम भगवानलाई भोग लगाए जत्तिकै हुने मान्यता छ ।
हुन त, सबै जीव जन्तुको खानाको बारेमा ध्यान राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो । यही कारण पनि गाईलाई अन्न खुवाउने परम्परा शुरु भएको भनिन्छ । पहिले पहिले गाईलाई घाँस खुवाईन्थ्यो । तर प्राय ठाउँमा बस्ती बाक्लिदै गएपछि त्यो सम्भव भएन । त्यसैले गाईलाई रोटी खुवाउन थालिएको हो । यसो गर्नाले घरको सुख शान्ति कायम रहन्छ पनि भनिन्छ ।